China kuita kufambisa data kunze kwenyika inyaya yekuchengetedza nyika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » China kuita kufambisa data kunze kwenyika inyaya yekuchengetedza nyika
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Ongororo yekuchengetedzwa kwemukati inofanirwa kuenda kuburikidza nehuwandu, huwandu, hwakasiyana uye kuvanzika kwe data kupihwa mhiri kwemakungwa uye kuongorora njodzi dzinogona kufambiswa nedanho rakadaro pazvido zvehurumende neruzhinji uye kodzero dzepamutemo uye zvido zvevanhu nemasangano.
Masangano anoda kupa data kunze kwenyika achave ari pasi pekuongorora kwehurumende yeChina.
Kana iyo data ichizofambiswa zvakachengeteka pasina kukuvara uye kuvuza kwaizoongororwa.
Chirevo chemutemo chakaburitswa kukumbira pfungwa dzeveruzhinji, chirevo cheCyberspace Administration of China (CAC) chakadaro.
The Cyberspace Administration yeChina (CAC) yakaburitsa dhizaini nhasi, ichizivisa kuti masangano ese anoda kupa data kunze kwenyika anogona kuenda kuburikidza nekuongorora kwekuchengetedzwa kwemukati uye, pane dzimwe nguva, achave ari pasi pekuongororwa kwehurumende.
Gwaro remutemo rakaburitswa kuti ritsvage pfungwa dzevanhu, chirevo cheCAC chakadaro.
Ongororo yekuchengetedzwa kwemukati inofanirwa kuenda kuburikidza nehuwandu, huwandu, hwakasiyana uye kuvanzika kwedata rinozopihwa mhiri kwemakungwa uye kuongorora njodzi dzinogona kuitika padanho rakadaro pazvido zvehurumende neruzhinji uye kodzero dzepamutemo uye zvido zvevanhu nemasangano, gwaro rakadaro.
Kunyangwe iyo data ichizofambiswa zvakachengeteka pasina kukuvara uye kuvuza kunofanirwawo kuongororwa, yakawedzera.
Kana iyo data yakaunganidzwa kubva kune makuru IT zvivakwa mapurojekiti mukati China kana muunganidzi anoshanda bhangi re data rine ruzivo rwemunhu miriyoni kana kupfuura, ongororo yekuchengetedza inofanira kuendeswa kune Các.
Gwaro racho rakati Các ichapfuurawo kuburikidza nekuongorora kuchengetedza kwekugovera kunze kwenyika ruzivo rwevanhu ve100,000 vanhu kana kupfuura.